အိန္ဒိယသမ္မတကတော် ရမည်းသင်းမြို့သူ ဒေါ်တင့်တင့် – Myanmar top news
အိန္ဒိယသမ္မတကတော် ရမည်းသင်းမြို့သူ ဒေါ်တင့်တင့်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ B.A ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ‘မြန်မာစာပေနှင့် ဘာသာစကားဌာန’တွင်နည်းပြဆရာမ လုပ်ခဲ့သည်။ယင်းကာလများအတွင်း ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိနေသော အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးအရာထမ်း K.R. Narayanan နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။မတင့်တင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ YWCA အသင်းမှတစ်ဆင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများစွာ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ Delhi School of Social work တွင် ပညာတော်သင်တစ်ဦးအနေဖြင့် Master degreeကို ရယူခဲ့သည်။၁၉၅၁ ဇွန် ၈ ရက်နေ့တွင် ဒေလီတရားရုံး၌ပင် K.R. Narayanan နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Narayanan သည် အိန္ဒိယ သံတမန်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး မတင့်တင့်မှာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဖြစ်နေသည့်အတွက် လက်ထပ်မှုတရားဝင်ဖြစ်စေရန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျဝါဟလာနေရူး ကိုယ်တိုင် ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။အိန္ဒိယနာမည် ‘ဥရှနာရာယန်း’ အမည်ခံယူပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ထူးချွန်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။၁၉၉၈ တွင် ဆရာသိန်းဖေမြင့်၏ ဝတ္ထုတိုများကို စုစည်းပြီး Sweet and Sour အမည်ဖြင့် ဘာသာပြန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်၁၉၉ရ – ၂၀၀၂ တင်K.R.Narayanan အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဒဿမမြောက်သမ္မတဖြစ်လာသောအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး Foreign-born First Lady ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမ္မတဦးဆောင်သည့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး သမ္မတ နာရာယန်းအတွက် အရေးကြီးသော မိန့်ခွန်းများစွာကိုလည်း ဒေါ်တင့်တင့်ကိုယ်တိုင်ရေးသားပေးခဲ့ရသည်။ဒေါ်တင့်တင့်သည် ခင်ပွန်းကွယ်လွန်ပြီး သုံးနှစ်အကြာ အသက် ၈၆ နှစ်၊ ၂၀၀၈ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ရက်နေ့ ညနေတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့၌ပင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူ အုတ်ဂူအတူမြှုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနာမည် ‘မ တင့်တင့်’ကို ၎င်း၏ သဘောဆန္ဒအရ ရေးထိုးစေခဲ့သည်။Chitra Narayanan နှင့် Amrita Narayananဟူ၍ သမီးနှစ်ယောက် ထွန်းကားသည်။သမီးကြီး Chitra Narayanan မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် သံတမန်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Sooth (ဆရာတော်အားလေးစားစွာ ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်)
ရနျကုနျတက်ကသိုလျမှ B.A ဘှဲ့ရရှိခဲ့ပွီး ‘မွနျမာစာပနှေငျ့ ဘာသာစကားဌာန’တှငျနညျးပွဆရာမ လုပျခဲ့သညျ။ယငျးကာလမြားအတှငျး ရနျကုနျမွို့သို့ရောကျရှိနသေော အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေးအရာထမျး K.R. Narayanan နှငျ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျခဲ့သညျ။မတငျ့တငျ့သညျ ရနျကုနျမွို့ YWCA အသငျးမှတဈဆငျ့ လူမှုရေးလုပျငနျးမြားစှာ ကွိုးစားဆောငျရှကျခဲ့သညျ။အိန်ဒိယနိုငျငံ Delhi School of Social work တှငျ ပညာတျောသငျတဈဦးအနဖွေငျ့ Master degreeကို ရယူခဲ့သညျ။၁၉၅၁ ဇှနျ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ဒလေီတရားရုံး၌ပငျ K.R. Narayanan နှငျ့ လကျထပျခဲ့သညျ။
Narayanan သညျ အိန်ဒိယ သံတမနျဝနျထမျးဖွဈပွီး မတငျ့တငျ့မှာ နိုငျငံခွားသား တဈဦးဖွဈနသေညျ့အတှကျ လကျထပျမှုတရားဝငျဖွဈစရေနျ ဝနျကွီးခြုပျ ဂဝြါဟလာနရေူး ကိုယျတိုငျ ဥပဒကေိုပွငျဆငျပေးခဲ့သညျ။အိန်ဒိယနာမညျ ‘ဥရှနာရာယနျး’ အမညျခံယူပွီး လူမှုရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ထူးခြှနျစှာ ပါဝငျဆောငျရှကျခဲ့သညျ။၁၉၉၈ တှငျ ဆရာသိနျးဖမွေငျ့၏ ဝတ်ထုတိုမြားကို စုစညျးပွီး Sweet and Sour အမညျဖွငျ့ ဘာသာပွနျပုံနှိပျထုတျဝခေဲ့သညျ၁၉၉ရ – ၂၀၀၂ တငျK.R.Narayanan အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ ဒဿမမွောကျသမ်မတဖွဈလာသောအခါ အိန်ဒိယနိုငျငံ၏ ပထမဆုံး Foreign-born First Lady ဖွဈလာခဲ့သညျ။
သမ်မးဆောငျသညျ့ လူမှုအကြိုးပွုလုပျငနျးမြားတှငျ တကျကွှစှာပါဝငျခဲ့ပွီး သမ်မတ နာရာယနျးအတှကျ အရေးကွီးသော မိနျ့ခှနျးမြားစှာကိုလညျး ဒျေါတငျ့တငျ့ကိုယျတိုငျရေးသားပေးခဲ့ရသညျ။ဒျေါတငျ့တငျ့သညျ ခငျပှနျးကှယျလှနျပွီး သုံးနှဈအကွာ အသကျ ၈၆ နှဈ၊ ၂၀၀၈ ဇနျနဝါရီလ ၂၄ရကျနေ့ ညနတှေငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ဒလေီမွို့၌ပငျ ကှယျလှနျခဲ့သညျ။ကှယျလှနျခြိနျတှငျ ခငျပှနျးသညျနှငျ့အတူ အုတျဂူအတူမွှုပျခဲ့ပွီး မွနျမာနာမညျ ‘မ တငျ့တငျ့’ကို ၎င်းငျး၏ သဘောဆန်ဒအရ ရေးထိုးစခေဲ့သညျ။Chitra Narayanan နှငျ့ Amrita Narayananဟူ၍ သမီးနှဈယောကျ ထှနျးကားသညျ။သမီးကွီး Chitra Narayanan မှာ အိန်ဒိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနတှငျ သံတမနျတဈဦးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီး ၂၀၀၄ ခုနှဈတှငျ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံဆိုငျရာအထူးအာဏာကုနျလှဲအပျခွငျးခံရသော အိန်ဒိယသံအမတျကွီး ဖွဈလာခဲ့သညျ။
Sooth (ဆရာတျောအားလေးစားစှာ ခရကျဒဈပေးပါသညျ)
← မြန်မာဖက်ကနေ မှောင်ခိုတင်ပို့တဲ့ ဒေါ်လာ ၄ သန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ ရွှေချောင်းတွေ အိန္ဒိယမှာ ဖမ်းမိ
လူ လို က် ပါ တဲ့ တ ရု တ်ေ ရငုပ်သေ င်္ဘာ ကမ္ဘာ့အ န က်ဆုံးသမုဒ္ဒ ရာကြ မ်းပြ င် ဆီရောက်ရှိ →